अख्तियार प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेकै छोराद्वारा शक्तिको दुरुपयोग, ३० लाखको विज्ञापन अन्नपूर्ण पोस्टमा – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, माघ २९, २०७५१२:३३0
काठमाडौं, २९ माघ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार आफ्नो स्थापना दिवस मनाएको छ । अख्तियारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बोलाएर आफ्नो स्थापना दिवस मनाएको हो ।
अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नवीन घिमिरे छन् । उनी पूर्वसचिव पनि हुन् । अख्तियारका आयुक्त हुँदै उनी प्रमुख आयुक्त बनेका हुन् । सोमबारको कार्यक्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नै विकासको मुख्य बाधक भएको बताए । अख्तियारले आफ्नो स्थापना दिवस (वार्षिकोत्सव) सधैं कुनै राष्ट्रिय दैनिकमा ‘अख्तियार विशेषांक’ निकाल्दै आएको छ । यसपटक अन्नपूर्ण दैनिकले ३६ पृष्ठको विशेषांक निकालेको थियो ।
यसपटक अन्नपूर्णले अख्तियारबाट ३० लाख बढीको विशेषांक निकाल्न पाउनुमा प्रमुख भूमिका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेका छोराले निभाएका छन् । उनका छोरा मनिष लामो समयदेखि अन्नपूर्ण दैनिकमा कार्यरत छन् । अहिले उनी सो दैनिक पत्रिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
पहिले पहिले अन्नपूर्णले अख्तियारको विशेषांक निकाल्न पाउँदैनथ्यो । तर, यसपटक आफ्ना बाबु प्रमुख आयुक्त भएकाले अख्तियारको लाखौंको विज्ञापन मनिषले सिधै अन्नपूर्ण दैनिकमा लगेका हुन् । अख्तियारको विज्ञापन अन्नपूर्णले छाप्न नपाउने भन्ने होइन, तर सोही पत्रिकामा सीईओ भएका मनिषले बाबुको शक्तिको दुरुपयोग गरे भन्ने सन्देश गएको छ । यसमा नैतिकताको कुरा भएको र नैतिक भ्रष्टाचार अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त परिवारबाट भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
वाइडबडीमा देउवा “कनेक्सन” : दोषीलाई कारवाहीको माग हुँदा देउवा पत्नी आरजुलाई तनाव !
रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलको धम्कीले प्रहरी बढुवानै रोकियो ! सरकारमा मच्चियो खलबली
राप्रपाले आज दिउँसो रत्नपार्कमा धर्म निरपेक्षताको ब्यानर र पोस्टर जलाउने
प्रचण्ड परिवारको तस्बिर नारायणी तिरको, तर सबै मिडियाले राखे सुनकोसीको भन्दै, किन झुक्किए ?